९ असार, काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को डेल्टा (बी.१.६१७.२) भेरियन्ट म्युटेसन भएर ‘एवाई १’ (AY.1) अर्थात् ‘डेल्टा प्लस’ देखिएको छ । ‘एवाई १’ म्युटेसन ९ जनामा पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
४७ नमुना परीक्षण गर्दा ९ जनामा उत्परिवर्तित रुप देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी बताउँछन् । डेल्टा (बी.१.६१७.२) भेरियन्टको विकसित रुप भएकाले यसलाई ‘एवाई १’ अर्थात् डेल्टा प्लस नाम दिइएको छ । नेपालमा हालै पुष्टि भएको ‘एवाई १’ म्युटेट भाइरस भारतलगायत विश्वका १० देशमा देखिइसकेको छ । डेल्टा अर्थात् बी.१.६१७.२ भेरियन्टको म्युटेन्ट ‘एवाई १’ हो ।
‘एवाई १’ कति खतरनाक ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर गर्न सक्ने भनिरहँदा डेल्टा ‘बी.१.६१७.२’ भेरियन्टबाट विकसित भएको ‘ए वाई १’ अर्थात् डेल्टा प्लस कति खतरनाक छ भन्ने अध्ययनकै विषय भएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् । भाइरसले स्वरुप परिवर्तन गर्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो । डेल्टा भेरियन्टबाट म्युटेसन भएको भाइरस घातक हुन सक्ने आशंका गरिए पनि यसबारे पूर्ण अध्ययनपछि मात्रै यो कति घातक र संक्रामक छ भन्ने थाहा पाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘डेल्टा भेरियन्टबाट म्युटेसन भएकाले ‘ए वाई १’ बढी घातक हुन्छ भन्ने आशंका गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अध्ययनबिना घातक र तीव्र गतिमा फैलिन्छ भनेर भनिहाल्न सकिँदैन ।’
‘एवाई १’ भाइरसले एन्टिबडीको प्रतिरोध क्षमता कम गर्ने हो कि, डेल्टाभन्दा बढी स्मार्ट हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउनु स्वाभाविक भएको उनी सुनाउँछन् । नयाँ म्युटेसनबारे अध्ययनको विषय भएकाले सबैभन्दा पहिला सजकता अपनाउनु नै मुख्य कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
भारतले पनि ‘एवाई १’ अर्थात डेल्टा प्लसलाई भेरियन्ट अफ इन्ट्रेस्ट र भेरियन्ट अफ कन्सर्नका रुपमा राखेको छैन ।
यता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कोरोनाभाइरसका नयाँनयाँ भेरियन्टसँग जोगिने मुख्य आधार भनेकै जनस्वास्थ्यको नियम पालना हो । डेल्टा प्लस कति खतरनाक छ भन्नेबारे गहनरुपमा अध्ययन भइरहेको उनी बताउँछन् ।
धेरैजसो संक्रमितमा डेल्टा भेरियन्ट
नेपालमा कोरोना संक्रमितमध्ये धेरैलाई डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न भागबाट संकलन गरिएको ४८ वटा नमुनालाई ल्याबमा जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा ४७ नमुनामा डेल्टा भेरियन्ट देखिएको हो ।
कोरोनाको पुरानो भाइरस अल्फा भेरियन्टको संक्रमण ४८ मध्ये एउटा नमुनामा मात्रै देखिएको छ । अल्फा भेरियन्ट १६४ राष्ट्र भन्दा बढीमा फैलिसकेको छ भने डेल्टा भेरियन्ट अहिले विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा देखिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिलो पटक बेलायतमा देखिएको कोरोनाभाइरसको भेरियन्टलाई बी.१.१.७ अर्थात् अल्फा नामकरण गरेको छ । यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको भेरियन्टलाई बी.१.३५१ अर्थात् बिटा, ब्राजिलमा भेटिएको भेरियन्टलाई गामा, भारतमा देखिएको भेरियन्टलाई बी.१.६१७.२ अर्थात् डेल्टा नाम दिएको छ । भारतमै भेटिएको बी.१.६१७.१ भेरियन्टको नाम काप्पा दिइएको छ । नेपालमा ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’का रुपमा अल्फा (बी.१.१.७) र डेल्टा (बी.१.६१७.२) भेरियन्ट तथा भेरियन्ट अफ इन्ट्रेस्टका रुपमा कप्पा भेरियन्ट (बी.१.६१७.१) र पछिल्लो समय डेल्टा प्लस देखिएको छ ।